Momba anay | Yiwu Muran Import And Export Co., Ltd.
Yiwu Muran Import And Export Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2009, miaraka amin'ny fampandrosoana sy ny varotra. Ny vokatray lehibe indrindra dia ny borosy makiazy, borosy kosmetika, blender hatsaran-tarehy, fitaovana fanaovana makiazy ary vokatra hafa mifandraika amin'izany. Izahay dia manome borosy ho an'ny mpanjifantsika amin'ny tsena ivelany. Miaraka amin'ny mpiasa 90 ao amin'ny ozinay, amin'ny alàlan'ny ezaky ny mpiasanay, dia tonga mpanamboatra makiazy malaza sy azo antoka izahay. Miaraka amin'ny fahaiza-miasa mahomby, mampiasa fitaovana ara-tontolo iainana ihany, manatanteraka fifehezana kalitao dingana feno amin'ny famokarana, dia nanandrana hatrany ny tsara indrindra izahay mba hanomezana antoka ny kalitaon'ny vokatra tena tsara. Miaraka amin'ny ekipa mpamorona matihanina dia mamoaka maodely vaovao 20 amin'ny borosy makiazy izahay isam-bolana manaraka ny fomban'ny lamaody. Afaka manome modely isan-karazany lehibe ho an'ny fanaingoanao izahay, ary manolotra serivisy OEM sy ODM ihany koa. Ny ekipanay mivarotra dia hanara-maso akaiky ny fandrosoana tsirairay isaky ny lamina, hanaraka ny hevitry ny mpanjifa sy ny sosokevitra aorian'ny fandefasana azy, ary hifandray hatrany amin'ny mpanjifa ary hanampy amin'ny famahana ny olana rehetra. Ny orinasa MURAN dia nanolo-tena hitondra fahafaham-po ho an'ny mpanjifany. Manantena izahay fa hiara-miasa aminao ho amin'ny tombontsoa samy hafa sy hiara-mamorona ny hoavintsika mamiratra.
Ny orinasanay koa dia manana ekipa manokana amin'ny fanondranana varotra any ivelany, izay afaka manampy ny mpanjifa hividy ny vokatra takiana, mividy, manaraka, manara-maso ny kalitao, mamandrika, manondrana ary serivisy fanondranana hafa.
Mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fametrahana rafitra orinasa maoderina, ny Yiwu Foreign Trade Corporation dia nanao mavitrika ny fanavaozana ny rafitra anatiny ary nanangana rafitra fitantanana orinasa siantifika. Fanohanana kely ho an'ny orinasa ho an'ny orinasa import sy export
Manana maodely ara-barotra tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao izahay ary fahaiza-manao fanompoana tonga lafatra. Miaraka amin'ny ekipa matihanina, fitantanana henjana, vokatra sy fitaovana tena tsara, ary fihetsika tsy miangatra sy misokatra, dia miezaka ny Vondrona hamorona ny "Beauty of Oriental Beauty and Women". Ny kolontsaina hatsaran-tarehy sy fahasalamana amin'ny hatsarana tandrefana sy ny hatsaran-tarehy atsinanana dia mitambatra tanteraka, mamorona toetra sy fomban'ny hatsaran-tarehy atsinanana. Ilay mpanorina sy mpampita vaovao tsara tarehy "Oriental Beauty" dia namorona kolontsaina hatsaran-tarehy tatsinanana vaovao ho an'ny vehivavy hatrany.